Been -abuurka giraangirta curyaamiinta ayaa inta badan la mariyaa kululaynta, isbeddellada iyo hababka qaboojinta. Cafiska giraangiraha ayaa muujinaya xaalado urur oo kala duwan oo ay ugu wacan tahay halabuurka maaddiga iyo baaxadda giraangirta giraangirta. Marka la soo koobo, inta badan waxaa jira labada qodob ee soo socda.
1. Xaaladda abaabul ee illowga giraangiraha waaweyn
Noocyada giraangiraha giraanta guud ahaan waxaa lagu sameeyaa si toos ah u -sameynta biraha birta ah. Sababtoo ah tirada badan ee kululaynta (6 dab ama ka badan) inta lagu guda jiro been-abuurka, isbeddel aan sinnayn, kala-duwanaansho badan oo kala-jaad ah, iyo heer sare oo ah isku-darka walxaha, astaamaha ugu caansan ee qaab-dhismeedka hilmaaminta giraangiraha waaweyn ayaa ah ka-haroogga haray ee sarreeya iyo sinnaanta daran ee dhismaha. Jiritaanka (ifafaale kristal isku dhafan), oo ah qodob muhiim ah oo saameeya wax -qabadka gawaadhida waaweyn, sidaa darteed sidoo kale waa dhibaato u baahan in wax laga qabto naqshadaynta hannaanka daaweynta kulaylka ee iska -dhaafka weyn ee giraangirta.
2. Xaaladda urur ee iska-dhaafka taayirrada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah
Noocyada giraangiraha giraanta waxaa inta badan lagu sameeyaa geerida been abuurka ee astaamaha duuban. Badeecadaha hypoeutectoid (birta kaarboonka dhexdhexaadka ah, kaarboonka dhexdhexaadka ah ee birta qaabdhismeedka hoose), ka dib markii foojarkii ugu dambeeyay, markii hawo lagu qaboojiyey heerkulka qolka, adag iyo ferrite aad u weyn iyo qaab-dhismeedka luul ee Lamellar; loogu talagalay birta hypereutectoid, gaar ahaan kaarboon-sare iyo biraha dhafka sare leh, qaboojinta qunyar-socodka ka dib markii been-abuurka kama-dambaysta ah guud ahaan wuxuu heli karaa qaab-dhismeed qalafsan. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay farqiga u dhexeeya qaabka iyo qaybta isgoysyada ee iska -dhaafka giraangirta iyo qaboojinta aan la xakamayn karin, qaab -dhismeedku inta badan waa mid aan sinnayn. Isla mar ahaantaana, saamaynta cadaadiska heerkulka (oo sidoo kale loo yaqaan cadaadiska kuleylka) iyo cadaadiska qaabdhismeedka, culeysyada gudaha ee haraaga ah ayaa laga dhex abuuri doonaa hilibka giraangirta, sidaa darteed daaweynta kuleylka waa in loo adeegsadaa si loo daaweeyo. Hagaaji oo tirtir.
Daaweynta kulaylka ee iska dhaafida giraangiruhu waxay ku salaysan tahay nooca giraangirta giraangirta iyo alaabta ceeriin ee loo isticmaalo si macquul ah loo dejiyo xuduudaha habaynta kulaylka. Inta badan heerkulka kululaynta, waqtiga haynta iyo heerka qaboojinta, iyo iyada oo si buuxda loo habeeyo farsamada kululaynta iyo teknolojiyadda qaboojinta, oo ah qalabka kulaylka, xawaaraha kululaynta, jawiga kululaynta iyo aaladda qaboojinta, dhexdhexaadinta qaboojinta, si loo helo qaab -dhismeedka biraha, sifooyinka farsamada iyo sifooyinka farsamada . Adeegso waxqabadka. Sii ciyaar buuxda awoodda maaddada, iskana ilaali cilladaha daaweynta kulaylka (deformation, decarburization, dildilaaca iyo dhismayaasha aan caadiga ahayn, iwm.), Sidaa darteed daaweynta kuleylku waa hab socodsiin aad u muhiim ah oo lama huraan u ah samaynta curyaaminta giraangirta.
Ku dhowaad dhammaan hilmaaminta qabow, diirran iyo kuleylka kulul waa inay gudbaan daaweynta kulaylka si ay u noqdaan qaybo u qalma. Heerka tiknoolajiyadda daaweynta kulaylka ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya hubinta iyo hagaajinta waxqabadka, saxnaanta, xasilloonida iyo nolosha adeegga qaybaha. Isla mar ahaantaana, alaabta ceeriin, kululaynta, Geedi socodka been abuurka iyo qaboojinta ayaa sidoo kale saameeya tayada daaweynta kulaylka ee iska dhaafida giraangirta. Labaduba waa dad isku dhow oo aan kala maarmi karin.